आफ्नै श्रीमतीसँगको अन्तरङ्ग पल वेभसाइटमा हालेपछि…. | Sambad Media
आफ्नै श्रीमतीसँगको अन्तरङ्ग पल वेभसाइटमा हालेपछि….
भारतको हैदरावादका एक सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई आफ्नै श्रीमतीसँग बिताएको अन्तरंग पल वेभसाइटमा अपलोड गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।
साइबर क्राइम शाखाले ६ हप्तासम्म गरेको छानविनपछि सफ्टवेयर इन्जिनियरलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीमा २०१६ नोभेम्बरमा अभियुक्तकी श्रीमतीको उजुरी परेको थियो ।
पीडितले आफूलाई यसबारेमा साथीले जानकारी दिएको बताएकी थिइन् । यद्यपि उजुरी दर्ता गर्दा पीडितलाई घटनामा आफ्नै श्रीमानको संलग्नता रहेको शंका नरहेको बताइएको छ। सफ्टवेयर इन्जिनियरको एउटा पोर्न साइटमा एकाउन्ट रहेको पत्ता लागेको छ।
उक्त वेभसाइटमा उनले आफ्नी श्रीमतीसँग बिताएको पल लाइभ स्ट्रीमिङको माध्यमबाट अपलोड गर्ने गरेका थिए । प्रहरीले केरलको थ्रिसुरमा पनि पोर्न साइटमा भिडियो अपलोड गर्ने एक जना पत्ता लगाएको जनाएको छ। यद्यपि उनले अन्य वेभसाइटबाट भिडियो डाउनलोड गरेर अन्य वेभसाइटमा अपलोड गर्ने गरेका थिए ।
आरोपीले आफूलाई बाल्यकालबाटै पोर्नोग्राफीको लत लागेको र एस्कांर्ट सर्भिसबाट केही रकमसमेत कमाएको स्वीकार गरेका छन् । उनले अपलोड गरेको भिडियोमा श्रीमतीको मात्र अनुहार आउने गरी हालेको बताइएको छ। उनले श्रीमतीसँग अन्तरंग पल बिताउने क्रममा ल्यापटपमा कुनै भिडियो लगाएर वेभ क्यामेराबाट आफ्नो अन्तरंग पल लाइभ स्ट्रीमिङ गर्ने गरेका थिए । प्रहरीको सोधपुछमा उनले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका छन् । एजेन्सी